Ny tsy fahombiazana ny fonao | Fondation des Choisis de Jésus
Ny tsy fahombiazana ny fonao
1D_06: Anaka, aoka tsy hatahotra ianao, aza avela ho feno fanahiana na tahotra ny tsy fahombiazana ny fonao. Atodio aty Amiko ny fijerinao. Jereo ny Fitiavana izay omeko anao sy ireo olon-tianao. Jereo izay efa vitako ao anatinao sy manodidina anao. Jereo koa izay efa natomboko ho tanterahiko amin’ny alalanao.